Michael Owen oo saadaaliyay ciyaarta caawa dhex mari doonta kooxaha Bayern Munich iyo Liverpool – Gool FM
(Europe) 13 Maarso 2019. Halyeeyga kooxda Liverpool iyo kubada cagta Ingariiska ee Michael Owen ayaa aaminsan in Reds ay ka soo gudbi karto kulanka caawa ee Bayern Munich.
Kooxda Bayern Munich ayaa caawa ku soo dhaweyn doonta dhigeeda Liverpool garoonka Allianz Arena, si ay u wada ciyaaraan lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka xiisaha badan ee Champions League, kadib markii ay wada galeen brbar dhac 0-0 ah lugta hore ee lagu ciyaaray garoonka Anfield.
Liverpool ayaa ugu gudbi karta wareega siddeeda hadii ay kulanka caawa natiijo kasta ku badiso, ama barbaro kasta ee goolal ah wada galaan kooxda Bayern Munich.
Yeelkadeed, weeraryahankii hore kooxda Liverpool ee Michael Owen ayaa wareysi uu bixiyay kahor ciyaartan wuxuu ku muujiyay sida uu u doonayo in Reds ay caawa kasoo gudubto kooxda reer Gemrmany ee Bayern Munich.
“Aniga ahaan natiijadii kulanka lugta koowaad ee 0-0 ahayd ma xuma”.
“Liverpool ayaa u soo bixi karta wareega siddeeda, balse waa hadii ay badiso, ama ay ciyaarta ku dhamaato barbar dhac ee goolal la iska dhaliyo, Reds ayaa u soo bixi doona wareega xiga”.
“Bayern Munich waxay haatan ku jirtaa wakhti fiican, waxay dhaliyeen 6 gool kulankii ugu dambeeyay ay la ciyaareen kooxda Wolfsburg, laakiin ma ahan kooxda ugu fiican ee aan abid arkay”.